Shacabka magaalada Baladweyne oo si diiran usoo dhaweeyey maamulka Hirshabeelle. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shacabka magaalada Baladweyne oo si diiran usoo dhaweeyey maamulka Hirshabeelle.
A warsame 23 October 2016
Shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyn ayaa si diiran usoo dhaweeyey maamulka cusub ee Hirshabeelle , waxa ayna xuseen in ay aad ugu faraxsanyihiin qaabka iyo hanaanka loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabeelle.
Reer Baladweyne ayaa balan qaaday in ay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan madaxweynaha la doortay iyo xukuumada uu dhawaan soo dhisi doono ayagoo u rajeyey guul iyo in ay wax badan ka qabtaan caqabadaha iyo culeysyada taagan.
qaar ka mid ah shacabka ayaa madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble ka codsaday in uu xooga saaro dhanka amaanka ayagoo ka codsaday in uu gacan weyn ka qeysto sidii looga hortagi lahaa isbaarooyin iyo dhibaatooyin kale oo ay xuseen in ay ka jiraan qaar ka mid ah deegaanada hoos tago maamulka Hirshabeelle.
Shalay ayaa si rasmi ah loo caleema saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle ayadoo ay xaflada caleema saarkiisa ay kasoo qeyb galeen madax sare oo uu ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kasoo kala jeedo deegaanada uu maamulka ka arimiyo.
Tagged hiiraan, Hirsjabeele, shacabka
President praises AMISOM for role in Hirshabelle formation
Somaliland administration involved in Somalia “electoral process”